Fampandrenesana momba ny fanakatonana maharitra ny Ota Ward Hall Aplico sy ny famerenana indray ny fampiharana fampiasana trano aorian'ny fanakatonana | Fikambanan'ny fampiroboroboana ara-kolontsaina Ota Ward
Fampandrenesana momba ny fanakatonana maharitra ny Ota Ward Hall Aplico sy ny famerenana indray ny fampiharana fampiasana trano aorian'ny fanakatonana
202202 / 14(Month)
Ao amin'ny Ota Ward Hall Aplico, mba hiantohana ny fiarovana ny mpampiasa rehetra amin'izao fotoana izao, dia manao asa fanavaozana sy fanavaozana seismika amin'ny valindrihana amin'ny efitrano lehibe, efitrano kely ary efitrano lehibe, ary efitrano fampirantiana.
Ny fangatahana fampiasana ny efitrano lehibe manomboka amin'ny martsa 2023 (Reiwa 5) aorian'ny fanakatonana ny tranombakoka dia haverina amin'ny fandaharam-potoana manaraka.
Mariho fa mety tsy azo ampiasaina ny serivisy amin'ny martsa 2023 noho ny fanemorana tsy azo ihodivirana ny asa fanorenana.
Misaotra noho ny fahatakaranao sy ny fiaraha-miasa.Mbola misy ny tapakila mandritra ny fotoana mihidy.
Momba ny fotoana hanohizana ny fangatahana fampiasana trano
Ny fangatahana fampiasana trano amin'ny martsa 2023 (Reiwa 5) aorian'ny fanidiana ny tranombakoka dia haverina amin'ny manaraka.
Ny vaovao farany dia hapetraka ao amin'ny tranonkalantsika amin'ny fotoana rehetra.
Fotoana fampiharana indray
efitrano lehibe Nanomboka ny talata 2022 feb 4 (Reiwa 2) (Fanamarihana) Azafady, azafady fa mety tsy azo ampiasaina ny serivisy amin'ny martsa 2023 noho ny fanemorana tsy azo ihodivirana ny asa fanorenana.
Efitra kely / efitrano fampirantiana Manomboka ny Alatsinainy 2022 Aogositra 4 (Reiwa 8)
Studio A / B Nanomboka ny talata 2022 feb 4 (Reiwa 11)
Hivarotra tapakila hanaovana fampisehoana izahay ary hanaiky hofan-trano rehefa mikatona ny tranombakoka.
Ora fanokafana 9: 00-17: 00
Andro mihidy faran'ny taona sy fialantsasatry ny taona vaovao (12 / 29-1 / 3), fikojakojana sy fizahana
Lehiben'ny sampana fifandraisana sy fandrindrana ny fanorenana Takashi Kamoshida